Ny iPhone 14 dia hametaka puce 4 nm ary ny iPad Pro manaraka dia chip 3 nm | Vaovao IPhone
Azo antoka fa nokapohin'i Apple ny lohantsika tamin'ny fisafidianana TSMC amin'ny maha mpanamboatra ny mpikirakira azy. Ny mampiavaka azy avo dia manome chip vaovao mahomby hatrany, miaraka amin'ny haitao tena mandroso.
Efa manamboatra ny A15 amin'ny iPhone 13 miaraka amina maritrano 5 nm, fa ny chips manaraka ho an'ny fitaovan'ny Apple dia efa 4 nm, ary ireo 3 nm dia efa eo amin'ny dingana fitsapana. Ny iray farany.
Tatitra iray vao navoakanao Nikkei, miantoka fa samy vonona ny TSMC sy ny Intel hanamboatra processeur miaraka amin'ny teknolojia an'ny 3 nm. Midika izany fa ho lasa chip mahomby kokoa izy ireo noho ny ankehitriny, 5 nm.
Nanazava ilay lahatsoratra nilaza fa ny chip 3nm voalohany an'i Apple dia mety ho tonga amin'ny iPad (mety ho maodely Pro). ny iPhone 14 hampiasa SoC 4nm lehibe kokoa noho ny tahan'ny fandefasana programa / ora mitarika. Ity dia mbola fanatsarana hatrany amin'ny famolavolana chip 5nm hita ao amin'ny iPhone 12 ary hitohy hiakatra ao amin'ny iPhone 13 amin'ity taona ity.
Ny nanometera malaza (nm) dia ny elanelana misy eo amin'ireo transistors amin'ny chip. Rehefa mihena ny haben'ny fizotrany dia mihena ny banga eo anelanelan'ny transistors. Amin'ny ankapobeny dia miteraka famolavolana angovo mahomby kokoa sy avo lenta kokoa.
Ho an'ny iPhones manomboka amin'ity taona ity, hametraka puce Apple A15 namboarina tamin'ny habe iray izy ireo 5 nm izay efa eo amin'ny dingana famokarana betsaka, hahafahana mandefa azy ireo amin'ny volana septambra amin'ity taona ity.
Roa taona manomboka izao dia handray processeur i Apple 3 nm ho an'ny fitaovanao rehetra, misy ny iPhones, iPads ary Mac anao. Ny zavatra lojika tokony hatao dia ny manomboka amin'ny iPad Pro aloha, avy amin'ny fomba fijery lojika. Ho endrika vaovao an'ny Apple M1 ankehitriny izy io. Iza no mahalala raha M2, na efa M3 vaovao ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Ny iPhone 14 dia hametraka puce 4 nm ary ny iPad Pro manaraka dia chip 3 nm